बैशाख २२ गते हुने नेपाल पत्रकार महासंघको प्रदेश समितिको अधिवेशनको केहीअघि दलीय पत्रकारिता गर्ने तीन संस्थाहरूले एक आपसमा सिट बाँडफाँड गरी नश्लीय पत्रकारिताको अनुपम नमूना पेश गरेका छन् । प्रदेश समितिको अधिवेशनमा पार्टी पत्रकारिता गर्दै आएका प्रेस चौतारी नेपाल, नेपाल प्रेस युनियन र प्रेस सेन्टर नेपालले तालमेलको नाममा सिट बाँडफाँड गरी नश्लीयतालाई प्रश्रय दिएको छ ।
तीन संस्थाका पदाधिकारीको बैठकले भौगोलिक सात र गैरभौगोलिक तीन गरी १० प्रदेशका नेतृत्व र कार्यसमितिमा सहमतिका साथ उम्मेदवारी दिने गरेको निर्णय पत्रकार महासंघमा सिन्डिकेट लाद्ने नियतले गरिएको हो ।
प्रदेश समितिको अधिवेशनमा प्रेस चौतारीले पाँच, प्रेस युनियन दुई र प्रेस सेन्टरले तीन प्रदेशको नेतृत्व लिने सहमति गरेका छन् । सबै प्रदेश सिमितिका पदाधिकारी र सदस्यमा तीनै संस्थाले भागबण्डा गरी उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेका छन् ।
यसले के देखाउँछ भने नेपाली सञ्चार जगतका नेतृत्व पंक्तिहरू अधिकांश पार्टी पत्रकारिता वा नेताभक्तिका इतिहास बोकेका छन् । सिन्डीकेट प्रथा, भागबन्डा र भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै कलम चलाउनेहरू स्वयं दलीय भागबण्डामा विश्वास राख्छन् । पत्रकार महासंघको चुनाव होस् वा सञ्चारमाध्यमभित्रको कुनै राजनीतिक नियुक्ति, अवसरको कुरा होस् वा जिम्मेवारीको आज पनि पार्टीको कोटामा उभ्न छाडेका छैनन् । अग्रज पत्रकारहरूको दलीय समर्पण र वेइमान चाहनाले सिङ्गो सञ्चार जगत कलुसित बन्दैछ ।
पत्रकारहरू यसैगरी आस्थाको राजनीति गरिरहने र भागबन्डामा पद लिइ रहने हो भने सायद श्रमजिवी पत्रकार ऐनअनुसार तलब पाउ भनेर निवेदन लेख्ने परिस्थिति नै आउँदैन्थ्यो । विश्वमा द्रूतगतिमा विकास भइरहेको सूचना प्रविधिको विकाससँगै आमसञ्चार तथा पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि निकै प्रगति भएको छ तर त्यसअनुरूपको व्यवहार र मानसिकतामा बदलाव आएको छैन । समयानुकूल पत्रकारिताको मूल्य र मान्यता फेरिन सकिएको छैन ।
पत्रकारलाई विश्वले राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा स्वीकारेको छ । तर नेपालका पत्रकारहरूको असम्वेदनशीलतासँगै निःस्वार्थ भावमा इमान्दारीतापूर्वक पत्रकारिता नगर्ने परिपाटीले राज्यको चौथो अंगको उपाधी उखानमा सीमित हुने सम्भावना बढेर गएको छ । यो कुरालाई लामो समयदेखि पत्रकारितामा समर्पित तथा नवप्रवेशीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्दछ ।
पत्रकारितालाई ठेकेदारी प्रथा बनाएर पत्रकार महासंघमा हावी हुने प्रवृतिले पत्रकारिताको सौन्दर्य नै हराएको छ । भागबन्डामा गएर पत्रकारको नेता हुँ भन्ने धाक लगाएर आफनो स्वार्थपूर्तिका लागि मात्रै पत्रकार महासंघ हो भन्ने पक्कै होइन । पत्रकार महासंघले केही उल्लेखनीय काम गर्न नसकेर त्यसै बदनाम भइसकेको छ तर त्यसमाथि पनि सिन्डिकेटको नाममा पदीय भागबन्डा गर्नु भनेको यसलाई थप निस्क्रिय र पंगु बनाउनु नै हो । यस विषयमा पत्रकार महासंघको वर्तमान नेतृत्वको मौनता र अग्रज पत्रकारहरूको चुप्पी झन् रहस्यमय बनेको छ ।
पत्रकारहरूको साझा चौतारीलाई दलीय सिन्डिकेटको रूपमा रूपान्तर गर्ने हो भने एउटा पार्टीको भातृ संगठन र स्वतन्त्र हैसियतमा रहँदै आएको पत्रकार महासंघमा के नै अन्तर रह्यो र । पत्रकार महासंघको नेतृत्वका निम्ति प्रतिस्पर्धा र लोकतान्त्रिक विधिबाट यसको निक्र्योल स्थापित अभ्यास र मान्यताहरू हुन् । यसलाई सामान्य र स्वाभाविक प्रक्रिया मानिएकाले प्रतिस्पर्धाको गठबन्धन र अङ्कगणितीय हिसाबकिताब नयाँ विषय पनि होइन । तर निर्वाचन गर्नु पूर्व नै आपसमा पद मिलान गर्नु भनेको पक्कै अलोकतान्त्रिक काम हो ।
श्रमजीवी पत्रकारकारहरूको हित र स्वतन्त्र पत्रकारितालाई मूल नारा बनाएको पत्रकार महासंघ यसरी राजनीतिक आस्थाका आधारमा पत्रकारहरू ध्रुवीकरणमा जानुलाई भने कदापि स्वाभाविक मान्न सकिन्न । पत्रकारिताको आवरणमा राजनीतिक दल विशेषका हतियारको रूपमा अघि सर्नु नै पत्रकारहरूको पेशागत हित संरक्षण र अग्रगतिको मुख्य बाधक हो । यो आचरणमा आमूल सुधार र शुद्धीकरण अहिलेको मुख्य आवश्यकता पनि हो । राजनीतिक आस्थाका आधारमा खण्डित नेतृत्वले आम पत्रकारको हितका सवालमा माखो मार्न सक्दैन । यो तीतो लागे पनि सत्य हो । असहज भएपनि सत्यलाई हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ ।
सार, अन्तरवस्तु जे भएपनि राजनीतिक खोल नओढी पत्रकारको नेता हुन असम्भवजस्तै देखिएको छ भन्ने नै हो । यस कारण प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, क्रान्तिकारी वा अरू यस्ता संगठनहरू र तिनको रिमोट लिएर बसेका दलगत नेताहरूको नियन्त्रणमा स्वतन्त्र पत्रकारिता र पेशागत हित कसरी प्रत्याभूति हुन्छ ? के यी संगठनमा चासो नराख्नेहरू पत्रकार होइनन् ? पत्रकार हुन पार्टीको कार्यकर्ता नै हुन आवश्यक छ ? पत्रकारहरू दलीय आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा खण्डित भइरहँदा चासो र चिन्ताको विषय यही हो ।